नियमराज श्रेष्ठ | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा नियमराज श्रेष्ठ
on: August 13, 2012 शिक्षा
बीटीटीएम संयोजक, पब्लिक युथ क्याम्पस
नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र नै पर्यटन हो
आतिथ्य व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्ने कलेजहरूको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या थोरै बनाइएको छ । तर, बजारमा यसको माग बढी छ । धेरै विद्यार्थीले चाहेर पनि यो विषय पढ्न नपाइरहेको अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता महसूस गरिरहेका छन् । यसको बजारको आकार ठूलो छ, माग पनि उच्च छ । तर, पढाउने संस्था थोरै भएकाले यो विषय पक्कै पनि कलेजका लागि ‘सष्टेनेबल’ हुन्छ ।
ठूलो बजार र धेरै माग हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयहरू थप सम्बन्धन दिन किन चाहिरहेका छैनन् ?
मुख्य कुरा नै गुणस्तर कायम गर्नु हो । पर्यटनजस्तो विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न निकै ठूलो लगानी र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । यसलाई कायम गरेका कलेजले मात्रै सम्बन्धन पाइरहेका छन् । अर्को कुरा हामीलाई कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने पनि हो । यसलाई पनि आधार बनाएर विश्वविद्यालयले धेरै सम्बन्धन नदिएको हुन सक्छ । त्यसो त विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पनि यहाँ कलेज सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्ता कलेजमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीको लक्ष्य विदेश जाने नै हुन सक्छ । विदेशमा पनि रोजगारीको अवसर राम्रो भएकाले सम्बन्धनलाई खुकुलो बनाउँदा पनि समस्या हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपालमा बीटीटीएम विषय पढाउने दक्ष शिक्षक कत्तिको उपलब्ध छन् ?
दक्ष शिक्षक सीमित छन् । तर, ठूलो अभावचाहिँ छैन । हामीकहाँ यो विषय पुरानो भइसक्यो । यो विषय अध्यापन गराउने कलेज सीमित भएकाले पनि शिक्षकमा त्यति ठूलो समस्या छैन भन्ने लाग्छ । हामीले नै पढाएका विद्यार्थी अहिले शिक्षक भएर आइसकेका छन् ।
बीटीटीएम पास गरेका विद्यार्थीका लागि रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा अहिलेकै अवस्थामा पनि बीटीटीएम पास गर्नेमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूको माग यति बढिरहेको छ कि हाम्रो कलेजमा अन्तिम सेमेष्टरमा अध्ययनरत प्रायः सबै विद्यार्थी कुनै न कुनै रूपमा रोजगारीमा संलग्न भइसकेका छन् । अर्कोतिर नेपालमा पर्यटन विकासको गतिले भर्खरै तीव्रता लिँदै छ । बजारको आकार बढ्दै गएकाले भविष्यमा पनि पर्याप्त रोजगारी सृजना हुने सम्भावना छ । ५० वर्षअघि वार्षिक २/४ सय पर्यटक आउने हाम्रो देशमा अहिले १० लाख पर्यटकको अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।
पर्यटक आउने ट्रेण्ड हेर्ने हो भने आगामी दिनमा पर्यटनको व्यावसायिक विकासले निकै ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना छ । यसले पनि बीटीटीएम पढेकाहरूको भविष्य उज्ज्वल रहेको देखाउँछ । किनकि, हाम्रो सबैभन्दा ‘सष्टेनेबल’ उद्योग भनेको पर्यटन नै हो । हामी न कार बनाएर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, न त अरू कमोडिटिजमा । नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटै क्षेत्र पर्यटन हो, जसलाई सगरमाथा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र पोखराजस्ता स्थानले साथ दिएका छन् ।
ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीकहा पर्यटनको अपेक्षित विकास भएको छैन । यसको तीव्र विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
तेञ्जिङ र हिलारीले सगरमाथा चढेपछि मात्रै सोलुखुम्बुका शेर्पाहरूले सगरमाथाको महत्व थाहा पाए । त्यसपछिका दिनमा पर्यटकको आगमन धेरै गुणाले बढ्यो । नाम्चेका शेर्पाहरूले पनि जुनी फेरे । हामीले कसरी तुलना वा अपेक्षा गर्ने भन्ने पनि मूल कुरा हो । हामीले कति पर्यटक आउँदा पर्याप्त मान्ने भन्ने हो ? कुनैबेला वर्षमा २/३ सय पर्यटक आउने ठाउँमा अहिले ६/७ लाख पुगिसकेको अवस्था छ ।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने सन्तोषको सास फेर्ने मात्रै होइन, गतिलो वृद्धिदरको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसकारण हामीले कहाँ, कति पर्यटक जान्छन् भन्नुभन्दा हामीकहाँ आउने पर्यटकको ट्रेण्ड कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । र, यसैअनुसार लक्ष्य राख्ने वा योजना बनाउने गर्नुपर्छ ।
नेपालका बीटीटीएम कलेज र ट्राभल एजेन्सीहरूबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?
नेपालका बीटीटीएम कलेज र ट्राभल एजेन्सीबीचको सम्बन्ध राम्रो छ । हाम्रा उत्पादन खपत गर्ने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई इण्टर्नशिप दिन पनि उहाँहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ । हामीले पनि उहाँहरूसँगको समन्वयमा समयानुसार कोर्समा नयाँ विषयहरू थप्दै र शीपमूलक हुने गरी शिक्षा दिने प्रयास गरिरहेका छौं । यसकारण बीटीटीएम कलेजहरूको मुख्य समन्वय नै ट्राभल एजेन्सीहरूसँग हुन्छ । यसका अतिरिक्त अरू टुरिजम अफिस र एयरलाइन्सहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । हामी त्यहाँ पनि इण्टर्नशिपमा विद्यार्थीहरू पढाउँछौं । उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ ।
अहिलेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय मूलतः गैरपर्यटन शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूले नै चलाइरहेका छन् । अबका दिनमा बीटीटीएम पढेकाहरूबाट पर्यटन विकासमा कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
म एउटा उदाहरण दिन्छु, भक्तपुरमा एकजना पर्यटक आयो । उसलाई साधारण गाइड (पथप्रदर्शक) तालीम लिएको व्यक्तिले घुमाउन लग्यो भने त्यो गाइडले पर्यटकलाई यो घरको नाम फलानो हो । फलानाले यति सालमा घर बनायो भनेर सतही जानकारी मात्र दिन सक्छ । तर, बीटीटीएम पढेकाहरूले पर्यटकलाई यो घर किन बन्यो ?, यसको प्रयोग किन र कसरी गरिन्थ्यो ?, अहिले यो दरबारलाई राज्यले किन ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्‍यो ? भनेर विश्लेषणात्मक ढङ्गले जानकारी दिन्छ । यसरी कथागत जानकारी दिँदा पर्यटकले यहाँका अनौठा र नयाँ कुरा थाहा पाउँछन् । त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पुग्छ भने त्यो एउटा पर्यटकले यहाँका सम्पदा र त्यसको महत्वबारे आफ्नो मुलुकमा बढी प्रचार गर्छ । त्यसले नेपालमा दीर्घकालसम्म पर्यटकको आगमन बढाउन सहयोग गरिरहन्छ । यसकारण पर्यटन उद्योगमा बीटीटीएम पढेकाहरू हुनुपर्छ । उनीहरूबाट यस्तै खालका थप अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।